I-bikini indawo ekahle. Khetha ukunakekelwa okungcono kakhulu
Ukususwa kwezinwele ezingadingeki endaweni esondelene nayo - inqubo iyisimo sobuhle ngaphezu kokuhlanzeka. Kodwa-ke, ohlelweni lendodakazi yanamuhla, wahlala ngokuqinile njengetshezi yasekuseni nasemapilweni ngaphambi kokulala. Ukuklama kwe-Bikini ikuvumela ukuba uhlale ungacabangi kunoma yisiphi isimo sokuphila. Imfashini yanamuhla ikuvumela ukuthi udlale ngokukhululekile izithombe, ubonise ukucabanga kanye nobuciko, kodwa ngaphambi kokungena ehlathini, kuyoba kuhle ukujwayelana nezinto eziyisisekelo.
Kunezindlela ezimbili zokususa izinwele - ukususwa kwezinwele nokuthungiswa. Khumbula ukuthi umehluko phakathi kwabo.
Indlela yokuqala ihilela ukukhishwa kwezinwele zonke, kufaka phakathi i-follicle. Esikhathini sekhishi, ukuphathwa okunjalo akusho eshibhile. Ngokuqondene nobude besikhathi, indawo ye-bikini izothatha kusuka emahoreni owodwa kuya kwamathathu, kuye ngokuthi indlela ekhethiwe kanye nohlobo lokuklama. Kodwa-ke, umphumela ugcinwa kuze kube yinyanga nonyaka, futhi ngemva kwezinhlelo ezimbalwa zezimila ezingadingeki, ngeke kube khona nhlobo.
Ukuthuthwa komzimba kuthinta kuphela umgomo, ngakho izinwele zikhula ezinsukwini ezimbalwa. Kodwa le ndlela inenzuzo enkulu - ukufinyeleleka. Hhayi ngaso sonke isikhathi le nkosikazi inesikhathi nemali yokuvakashela i-salon. Abaningi bavele bazizwe benamahloni ukunikeza indawo engafanelekile kumuntu ongaphandle. Ungenza u-depilation ngokwakho, bekuyoba nesifiso kanye nemizuzu embalwa.
Indlela ethandwa kakhulu yokukhishwa kwezinwele ekhaya iyisisindo esivamile . Ukusebenzisa ama-creams aphuza izinwele ezincane, umphumela wenqubo ungagcinwa izinsuku ezinhlanu. Noma kunjalo, ukucasuka ngemuva kokushefa i-bikini akuyona into engavamile. Ngaphezu kwalokho, le ndawo ayikwazi ukubizwa kalula, okusho ukuthi ukusikeka akukwazi ukugwema. Yiqiniso, ungasebenzisa imishini ekhethekile yabesifazane, ukuphunga ama-gel esikhumba esibucayi, ukunakekelwa kwama-lotions. Kodwa nokho le ndlela iye yayisilokhu izolo.
Ama-creams wokudwengula ngesikhathi somphumela ahluke kancane kusuka ekuthungeni.
Okunye okunye - izinwele ziba mncane, zifinyelele ekuthinteni. Awuyikukhula, kodwa ukukhula okunamandla. Futhi ukusingatha izindawo ezinzima ukufika ngosizo lwekhilimu kuyinto elula kakhulu futhi ephephile. Kodwa-ke, ukucasuka endaweni ye-bikini uma usebenzisa inhlanganisela engafanele yokuthunjwa akuyona into engavamile.
Ekhaya, awukwazi ukuthungula kuphela, kodwa nokukhishwa kwezinwele. Kukhona amahemuhemu ukuthi amanye omama abasha basebenzisa izikhwama ukususa izinwele, kodwa kukhona amadivayisi anamuhla. Ukukhethwa kwama-epilator namuhla kunzima kakhulu. Akudingekile ukuthenga idivayisi ebiza kakhulu. Ukusebenza kwenqubo akuxhomeki ekuklanyeni nasegama elikhulu lomkhiqizi. Ngakho-ke intengo yalo mbuzo ikhona ebangeni kusukela ku-rubra 600 kuya ku-1000. Uma ucabangela ukuphila komsebenzi womsebenzi wendlu, ekugcineni kuyokubiza okungaphansi kwama-creams kanye nama-razors.
Kukhona ukungalungi kule ndlela. Okokuqala, indawo ye-bikini ibucayi, ngakho okokuqala inqubo izoba buhlungu. Kodwa ukususwa kwezinwele ngosizo lwe-wax, shugaring noma i-biomass akumnandi. Ngaphezu kwalokho, ikakhulukazi amacala anjalo kuma-pharmacy atholakalayo ukudayiswa kwe-anesthetic spray.
Inkinga inomboro emibili - izinwele ezimhlophe. Ukuze ugweme le nhlekelele, kufanele uhlwithe isikhumba ngaphambi kokuqothula futhi usebenzise isikhala njalo ngangokunokwenzeka ngemuva kwenqubo.
Ochwepheshe kule salon ubuhle ngeke banikeze kuphela ukusebenza kahle izinwele ukususwa, kodwa futhi design imfashini. Ungakhetha ukhetho lweklasi - indawo ye-bikini yenziwa nge-symmetrically, ngokusho kwamapulangwe angama-inguinal. Emaphethelweni okugeza kusebenza njengomngcele. Ukususa izinwele ezijulile kule ndawo kuthatha indawo ebonakalayo yesikhumba. Njengomthetho, umqansa omncane kuphela noma unxantathu encane ku-pubis uhlala. Noma kunjalo, ngokusekelwe ezifisweni zakho, inkosi ingakhetha nokuklama okuningi kokudala.
Izindlela zokususa izinwele zingahle zihlukaniswe ngokomzimba zibe yindlela yokusebenza (i-bioepilation kanye nezifanekiselo zayo) ne-hardware (laser, imisebe ekhanya kakhulu). Lezi zinsuku ziyabiza kakhulu, ngoba inkosi isebenza ngezinwele ngayinye ngokwehlukana. Lona umsebenzi owenza ubuhlungu, odinga ukuhlushwa nokugxila. Kodwa emva kwezinqubo ezimbili noma ezintathu, indawo ye-bikini nezinye izindawo ezinezimila ezingathandeki zizobe zibushelele ngokuphelele kuze kube phakade.
Ukususwa kwe-wax, ushukela ocibilikile noma i-biomass ayiniki umphumela unomphela. Emva kwamasonto amathathu noma amahlanu, ukubhujiswa kuyodingeka kuphindwe. Ngendlela, inqubo ingcono kakhulu, ngoba izinwele zisuswa emmpandeni. Imiphumela emibi uma usebenzisa i-biomass ifana nokusebenzisa i-depilator ekhaya: ukucasula isikhumba nokushaya, ukushaya, ukufaka isikhumba skeleton.
I-shugaring (i-sugar paste) ibhekwa njengento enhle yokususwa kwezinwele. Indawo ye-bikini ngemuva kokusetshenziswa kwayo ihlala ibushelelezi isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Ngaphezu kwalokho, ukunamathisela okuncane kakhulu kune-wax noma i-resin, akubanga ukuphendula kwe-allergen nezinwele ezingenhla.
Ngaphambi kokuhamba kwezinqubo ze-salon kuyadingeka ukuthi uthintane no-trichologist, okuzokusiza ukhethe indlela efanele. Ungakhohlwa ngama-contraindications. Lapho kukhona ukucasuka, ukushisa kwelanga, ukulimala okwenziwa ngamagciwane, ukuqhuma kwe-lymph nodes ekuguleni, noma yiluphi uhlobo lokususa izinwele alukhuthazwa. Ukukhulelwa isikhathi eside kanye nesifo sikashukela kufakiwe ohlwini lokuphikisana. Ukuvakashela i-salon ezinsukwini ezibucayi futhi nge-PMS nakho akufisi. Kungcono ukuhlehlisa umhlangano ne-cosmetologist ngesikhathi esifanele - izinsuku ezintathu emva kokuya esikhathini.
Izinsuku ezimbili ngemuva kokukhishwa izinwele ungasebenzisi ama-gels eshayela, ungafaki izingubo zokwenziwa.
Ngesikhumba esibucayi esicasulayo, emva kokususa izinwele ekhaya, sebenzisa ingane powder.
Black isithombo. ukupheka zokupheka
Ukuhambelana «Imbuzi kanye Imbuzi": yiziphi amathemba yangempela?
Ukuvula uMfoweth '4234D: ukubuyekezwa. Ukuvimbela uMfoweth '4234D: izinzuzo nezingozi
Ikhodi 902: okuyinto isitatimende? Yini opharetha isebenzisa 8-902 ikhodi?